Kuboshwe indoda ngezinsolo zokudlwengula izingane zabafana | News24
Kuboshwe indoda ngezinsolo zokudlwengula izingane zabafana
Kimberley – Owesilisa oneminyaka engu-39 ubudala uboshiwe kulandela izinsolo zokudlwengula nokunukubeza ngokocansi izingane ezimbili zabafana eHopetown, kusho amaphoyisa aseNorthern Cape ngoLwesihlanu.
Le ndoda ikhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngoLwesine ngaphandle kwaseHopetown epulazini okukholakala ukuthi isebenza khona njengemfolomani.
Lokhu kungemuva kokuthi umfana, 15, evule icala ngokudlwengulwa ngumsolwa, kusho okhulumela amaphoyisa uCaptain Olebogeng Tawana.
OLUNYE UDABA: Usenkantolo osolwa ngokudlwengula abafana
Le ndoda ibe isibekwa icala lokudlwengula, ukunukubeza ngokocansi nokuphatha isibhamu nezinhlamvu kungekho emthethweni.
"Kusolakala ukuthi le ndoda yayijwayele ukulanda ngemnoto lo mfana, 15, kanye nomngani wakhe oneminyaka engu-13 ubudala edolobheni eHopetown bese ibayisa epulazini ifike ibanikeze utshwala nezidakamizwa bese iyabadlwengula,” kusho uTawana.
Ngesikhathi eboshwa umsolwa, kushaqwe izithombe zocansi kanye nesibhamu nezinhlamvu.
Kulindeleke ukuba avele eNkantolo yeMantshi yaseHopetown ngoMsombuluko.